Global Voices teny Malagasy » Tondra-drano nandrava tany Pakistan · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Aogositra 2010 19:06 GMT 1	 · Mpanoratra Salman Latif Nandika Lila
Sokajy: Pakistana, Sakafo, Voina, Vonjy Voina
Tsy nitondra fitahiana ho an'i Pakistan tamin'ity taona ity ny Rivotra  mousson. Raha noheverina ho fotoam-pankalazana sy fifaliana amin'ny firotsahan'ny orana izany hatramin'izay, ny zava-niseho kosa izay nisian'ny tondra-drano mahatsiravina dia izay tsy nandrasan'ny Pakistaney velively.
Namely vao haingana ny rivotra mousson nifofofofo tamin'ny volana lasa ary ny tany Balochistan  no anankiray tamin'ireo lasibatra. Efa mihoatra ny 100 amin'izao fotoana izao araka ny fanisana no tavela tamin'izany, “olona marobe no zary tsy manan-kialofana taorian'ny naharava ny trano fonenany vokatry ny orambe izay namely ny ampahany maro tamin'i Baluchistan, ao anatin'izany i Sibi, Dera Bugti ary Barkhan” araka ny voalazan'i Dawn .
Ankoatra izany ihany koa, vao haingana dia nitroatra ihany koa ny reniranon'i Swat sy Kabul ao Khyber Pakhtunkhwa  . Namotika zavatra maro ny tondra-drano tao an-drenivohitry ny faritra Pershawar sy ny lemaka Swat, faritra izay niezaka namerina tamin'ny laoniny ny fiainan'ny mponina taorian'ny faharavana nihatra taminy nandritra ny ady namongorana ny Taliban tamin'ny taon-dasa. Voalaza mikasika an'i Nowshera, faritra lehibe iray ao amin'ny lemaka mahafinaritr'i Swat, mpanao gazety iray ao amin'ny Express Tribune  no nilaza fa iny tondra-drano iny dia namotika trano 10 000 tao Nowshera Kala ary mponina maherin'ny 5 000 no nifindra monina tany amin'ireo tanàna sy faritra manodidina.
Sary avy amin'ny zanabolana tao amin'ny Flickr nampiasa ny DigitalGlob-Imagery , nahazoana alalana tamin'ny Creative Commons BY-NC-ND 
Araka ny vaovao farany , olona 1, 5 tapitrisa no tra-boina vokatry ny tondra-drano ratsy indrindra tato anatin'ny 80 taona. Tafakatra hatramin'ny 1 100 ny isan'ny maty ary marobe no tsy nahazo vonjy sy fanampiana, ketoky ny rano ny faritra misy azy. Ny ratsy indrindra dia ny tsy fahampian'ny fanafody ho an'izay. Ny tena vetivety ny fiharatsiana dia ireo izay tratran'ny valan'aretina toy ny kôlera sy ny aretin-kibo. Andiana mpiasan'ny fahasalamana no nalefa tamin'ny helikoptera any amin'ny faritra mitoka-monina sy ny faritra sasany any Swat .
Henika ny resaka ity tondra-drano ity ny tontolon'ny bilaogy pakistaney. Tsy vitan'ny hoe maneho fiarahana sy fanehoana alahelo manoloana ireo niharam-boina fotsiny ireo mpitoraka bilaogy fa mitaky mivantana koa izay vahaolana avy amin'ny fanjakana. Aleon'ny fampahalalam-baovao miresaka ilay fianjeran'ny fiaramanidina tany Islamabad  toy izay hiresaka ny rano be, izay tranga nokianin'i Ahsan Butt ao amin'ny bilaoginy :
Etsy ankilany, miantefa kokoa amin'ny alalan'ny hafatra amin'ny alalan'ny facebook, bilaogy ary twitter, ireo mirona kokoa amin'ny asa famonjena tamin'ny tondra-drano. Ohatra amin'izany ny ‘Flood Relief’  pejy ao amin'ny bilaogy Secular Pakistan sy ny “Links to send donations, relief good ” [rohy handefasana ny fanomezana, sy kojakoja ilaina] an'i Beena Sarwar. LUBP (Let us Build Pakistan), bilaogy pakistanais hafa koa, izay nanao dingana  avy hatrany ka nanangona vola ary nandefa izany tany amin'ireo faritra voakasika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/08/04/7884/
 Express Tribune : http://tribune.com.pk/story/33379/evacuees-flood-victims-face-torrid-test/
 vaovao farany: http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/news/pakistan/04-disease-stalks-survivors-floods-qs-07
 faritra mitoka-monina sy ny faritra sasany any Swat: http://news.yahoo.com/s/afp/20100801/wl_afp/pakistanweatherfloods
 fianjeran'ny fiaramanidina tany Islamabad: https://globalvoicesonline.org/2010/08/02/pakistan-mourning-victims-of-plane-crash/
 dingana : http://criticalppp.com/archives/20410